Alshabaab: Dagaalku kuma joogsanayo dilka Abuu Zubeyr – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Alshabaab: Dagaalku kuma joogsanayo dilka Abuu Zubeyr
7th September 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Xarakada Alshabaab oo xalay si rasmi ah u shaacisay in talaadadii lasoo dhaafay Mareykanku duqeyn xaga xirka ah ku dilay hogaamiyahoodii Axmed Cabdi Godane oo loo yaqaanay Abuu Zubeyr ayaa sheegay in dilka hogaamiyahaas uusan u hakan doonin dagaalka ay ka wadaan Soomaaliya iyo Bariga Afrika.
Bayaan kazoo baxay Alshabaab ayaa lagu sheegay in dagaalku uu kusii xoogeysan doono dilka loo geystay hogaamiyaha ururkaas.
“Waxaan ugu bishaareyneynaa Mujaahidiinta in hanaankii Jihaadka Soomaaliya uusan u joogsan doonin dilka Sheekh Abuu Zubeyr, balse uu sii xoogeysan doono, shareecadeenu maaha fikir dhimanaya haddii qofkii weday dhinto” ayaa lagu yiri bayaanka Alshabaab.
Alshabaab ayaa dhanka kale dib u cusbooneysay bayco ay horay ula galeen hogaamiyaha Alqaacidda, Dr. Ayman Al-zawahiri. Arrintaas ayaa meesha ka saareysa shaki dhawaanahan ka jiray in laga yaabo in Alshabaab ka leexdaan Alqaacidda, kuna biiraan dowladda Islaamiga ah ee uu hogaamiyo Abuubakar Al-baqdaadi ee ka jirta Ciraaq iyo Suuriya.
Alshabaab ayaa ku dhawaaqay hogaamiye cusub, kaasoo magaciisa lagu sheegay Axmed Cumar (Abuu Cubeydah), ninkaas oo aan si weyn loo aqoonin haddii aan magaciisa saxda ah la bedelin.
1-dii bishaan September ayaa diyaaradaha dagaalka Mareykanku weerar xagga cirka ah ku qaadeen gaadiid uu watay hogaamiyaha Alshabaab oo marayayey gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana halkaas lagu dilay Abuu Zubeyr iyo labo sarkaal kale.
Nabad Sugidda Banaadir oo xirtay Idaacad baahisay codka Afhayeenka Alshabaab